USekelashansela Ubambe Izimbizo Nabasebenzi – University of KwaZulu-Natal
USekelashansela Ubambe Izimbizo Nabasebenzi
Home » News » USekelashansela Ubambe Izimbizo Nabasebenzi
ISekelashansela noMphathi uDkt Albert van Jaarsveld ubebambe izimbizo emakhempasini amahlanu eNyuvesi.
Inhloso yalezi zimbizo bekukwakha ithuba lokuxhumana nabasebenzi mayelana nezinkinga ababhekene nazo eNyuvesi.
Ikhempasi yokuqala kwaba eyaseMgungundlovu lapho abasebenzi baphakamise izinselelo ezixhumene nokuncipha kohlelo lwemihlomulo nokuncishiswa kwesibonelelo sokuhambela izingqungquthela okushiya izikhungo zocwaningo zidonsa kanzima. Okunye okwavela okumayelana nezilinganiso zohlelo lokuphathwa kokusebenza, iminyaka yokuthatha umhlalaphansi, ezemidlalo, nokubuyekezwa kwesizindamininingo sezababhizinisi ukuze kufakwe nezinkampani ezisakhula zihlanganyele nezinkampani ezinkulu.
Ongumhleli Wezabakhubazekile uNkk Yanga Khuboni ukhulume ngodaba lokufinyeleleka ezindaweni zokusebenzela kwabakhubazekile. UVan Jaarsveld uqinisekise uKhuboni ukuthi loludaba lungolunye lokuthathwa njengokubalulekile futhi okuphuthumayo e-UKZN futhi sekutholakale nesibonelelo sokulungisa lokhu esikhishwe yi-UKZN Foundation. Ucele abasebenzi ukuthi babalule izindawo ezidinga ukuphuthunywa ukuze zilungiswe ngokushesha.
USekelashansela ube esephikelela ekhempasini i-Edgewood lapho kwavela lezi zinselelo ukusweleka kwendawo yokupaka izimoto zabasebenzi nabafundi, izigameko zokugqekeza ekhempasini nasezindaweni ezihlala abafundi, ukusweleka kokusekwa kwabafundi basemazweni angaphandle nokungenziwa ngcono kwenqubomgomo emayelana nokuhlukunyezwa ngokoncansi ekhempasini.
Isigaba sasekhempasini i-Westville besinesasasa kakhulu ngokwezithameli ebezikhona. Izinselelo ezingaphakanyiswanga e-Edgewood naseMgungundlovu zihlanganise nalezi ukuguqulwa kwezimokusebenza zabasebenzi kube ezintsha, ukuthuthukiswa kwabasebenzi nokusatshalaliswa kwamakhono ngokubanika amathuba okukhula ezikhundleni zabo. Ephendula, uSekelashansela uthe ukuthuthukiswa kwabasebenzi kuyingxenye ebalulekile eNyuvesi, wabuye wengeza ngokuthi nohlelo lokukhushulelwa kwabasebenzi ezikhundleni luyabuyekezwa ukuze kuqinisekiswe ukuthi ilandela inqubo elandelwa ezweni naphesheya kwezilwandle.
Indlela kubusa emazingazinga, izinhlelokusebenza ezingasebenzi noma ezintulekayo, izindaba ezingezinhle emaphephandabeni, umkhankaso wemali yokufunda i-#FeesMustFall# nezokuphepha ekhempasini kube ezinye zezinselelo ezivele e-Howard College. UVan Jaarsveld uphendule konke okuphakanyisiwe futhi wagcizelela ukubaluleka kwesiko nosimo okuyikho okungumongo wohlelosu lweNyuvesi olusha.
Ugcizelele ukubaluleka kwabantu ekuqinisekiseni ukuthi izinhlelo ezikhona zisetshenziswa ngendlela efanele. ‘Kumele siyeka ukusola izinhlelokusebenza,’ usho kanje.
USolwazi Anand Singh womkhakha weSayensi Yemvelaphi neNhlalo Yabantu ukwamukele ukuguquka kwabaphathi beNyuvesi okwenzeka ngaphansi kobuholi buka –van Jaarsveld, waphinde futhi wasekela ukwakhiwa kwesimo esivuna inhlalo esendaweni ethandekayo’.
‘Asizibophezele ekubeni uhlobo lweNyuvesi esifuna ukuba yiyo,’kusho u-van Jaarsveld.
Ukukhushulelwa esikhundleni akuhambelani neNyuvesi yonke, kubhekisiswa nokukhushulelweni ezikhundleni emisebenzini eyenziwa abasebenzi abangaholelwa i-UKZN, uhlaka lwamaKolishi, udaba lokusabalala kweziqu i-MBCHB ezikoleni ezine kanye nohlelokulelela lwezimoto kube okunye okuphakanyiswe ekhempasini i-Nelson R Mandela School of Medicine session.
Mayelana nobekusabalele emaphephandabeni ngeNyuvesi, uSekelashansela uqinisekise abasebenzi ngokuthi iNyuvesi isebenza kanzima ukukhuculula izinhlelo zayo.
Uthe umgomo we-REACH uzobhekisiswa ezithangamini zangonyaka wezi- 2018.
U-Van Jaarsveld ucele abasebenzi ukuba basebenzise izimisompilo ze-REACH futhi kube khona isibophokubika.
Ngu-Sithembile Shabangu no-Raylene Captain-Hasthibeer
Posted on 2017-12-19 by Andronicus Akinyelu Ayobami
Prev article: A Job or a Career?
Next article: Accounting and Financial Skills Workshop for Entrepreneurs